मुक्त अनुभूतिमा रमेश-सुमन- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
मुक्त अनुभूतिमा रमेश-सुमन
चैत्र १४, २०७१ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ — कवि रमेशरञ्जन झा र सुमन पोखरेल दुवै तराई मूलका कवि हुन् । उनीहरूले राजधानीमा एक साथ आफ्ना रचना सुनाइरहँदा भावमा त्यसको स्वाद पाइन्थ्यो ।
बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा मुक्त अनुभूति को १०औं शृंखलाका लागि कविद्वयले आफ्ना अनुभूतिलाई रचना वाचनसँगै पस्कने मौका पाए ।
शृंखला मध्यस्तकर्ता रोहित खतिवडाले कविद्वयको काव्य अनुभूति निकाल्ने प्रयास सुरुदेखि थाले । उनले स्रष्टालाई रचना सिर्जनामा परिवेश र संस्कृतिले पार्ने प्रभावबारे जिज्ञासा राखे । कवि रमेशरञ्जन र सुमनले पनि कविताको विम्बमा संस्कृतिले फरक पार्ने र विषयवस्तुमा परिवेशले प्रभाव पार्ने साझा मत दिए । जनकपुरका रमेशले मैथिली भाषामै रचना सिर्जना गर्ने सुनाए । कार्यक्रममा उनले केही नेपालीमा अनुवाद गरिएका सिर्जना सुनाएका थिए । वाचनको शृंखलाचाहिँ मैथिली कविता पैकार बाटै सुरु गरे । त्यसपछि लगालग संक्रमण, अनेक रंगको देश, फ्रन्ट लाइन, सडकका मानिस, संघीयता सुनाए । काठमाडौंलाई मोफसलका स्रष्टाले कसरी बुझ्लान् ? नियमित सोधिने खालको उक्त जिज्ञासामा रमेशले अझै पनि केन्द्रबिन्दुको पहिचानबाट बाहिरिन नसकेको गुनासो गरे । कविले मैथिली कविता आक्रोश मा पनि यही आक्रोश पोखेका छन् ।
कवि सुमनले केटाकेटी, आदेश, गर्मी, हाटमा उभिएर, त्यो सहर कसको हो ?, स्वभक्षणको हक, ताज महल र मेरो प्रेम, र बिदा हुन्नँ सुनाउन भ्याए । उनका रचनाले समाज, राष्ट्र र समसामयिक परिवेशलाई प्रतिविम्बित गरेको बुझिन्छ । सुमनले रमेशका केही मैथिली कवितासमेत अनुवाद गरेका रहेछन् । यसै प्रसंग कोट्याउँदै रोहितले रमेश र सुमनलाई अनुवादमा हुने भिन्नता सोधे । सुमनले रचना सिर्जना गर्दा जति मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यति नै अनुवाद गर्दा पुन: सिर्जना गर्नुपर्ने दाबी गरे । रमेशले चाहिँ पुन: सिर्जना गर्दा कविताको मौलिक भाव, स्वरूप र संचरनामा परिवर्तन आउने बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७१ ०९:५३
रसिकको रसिलो प्रस्तुति
काठमाडौ — गीत सुन्दै रमाइलो । उनको गायन र हार्मोनियमको तालमेलले दर्शकमा झनै ऊर्जा थपिएको थियो ।
रातो भाले क्वाएँ क्वाएँ
उमेरले ६० नाघिसकेका गणेश रसिकले उपर्युक्त गीत दुई दशकअघि नै सिर्जना गरेका थिए । उक्त गीत पछिल्लोपटक शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिन आयोजित रसिकको एकल सांगीतिक प्रस्तुतिमा दर्शकले प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर पाए । रसिकको यो तेस्रो एकल कन्सर्ट हो ।
बत्तिसपुतलिस्थित शिल्पी थिएटरमा रसिकको दुईदिने ओ शून्यता एकल सांगीतिक प्रस्तुति भएको हो । पुराना र नयाँ गीतको कलेक्सन रहेको एल्बम ओ शून्यता पनि शुक्रबार नै सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी कुलपति रागिनी उपाध्यायले रसिकको एल्बम सार्वजनिक गरेका हुन् । रसिक संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिवसमेत हुन् ।
भादगाउँले टोपी र दौरासुरुवालमा ठाँटिएका रसिकले गाइरहँदा चार दशकदेखि गाउँदै आएका उनीमा जोसको कुनै कमी देखिएन । स्वर र लयमा उस्तै ताजपन थियो । संगीत, रचना र गायन तिनै विधामा अब्बल रसिकले बाँचुन्जेल संगीतमै लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । गीत गाउन रोकेर उनले २३ वर्षको उमेरमा काठमाडांै टेक्दाको समय सम्झिए ।
काठमाडौंलाई धेरैले गाली गर्छन्, उनले भने, मलाई काठमाडौंले नै सफल बनाएको हो । उनले काठमाडौंप्रति गुनासो पोख्न चाहेनन् ।
करिअरका दु:ख, सुखका अनुभव साट्दै उनले नयाँ/पुराना गीतहरू गाए । डा. अभि सुवेदीले भरियालाई सम्बोधन गर्दै २०३० मा लेखेको उकालीमा..., वासु शशीको गीत मसँग एउटा... बोलको गीत गाएपछि रसिकले आफ्नै रचना, संगीतका सिर्जना पस्किन थाले । ऐ है..., धेरै सम्झे धेरै हुन्छ..., लाखांै जुनी..., तिम्रो सुन्दर..., घरबेटी नानी..., तिम्रो निम्तो..., निद्रा लागेन... लगायत एक दर्जन गीत सुनाउन भ्याए ।
उनलाई युगल गायनमा चाहिँ गायिका झुमा लिम्बूले साथ दिएकी थिइन् । त्यस्तै, गितार तथा ब्यान्ड संयोजनमा अनुप दास, अकटुप्याडमा रुपेश सिहं, किबोर्डमा दिनेशराज रेग्मी, बेस गितारमा विक्रम कार्की, तबलामा भीपी सिंह, बाँसुरीमा सम्पूर्ण लामाको अर्केस्ट्राले साथ दिएको थियो । नयाँ एल्बमको ओ शून्यता... गाएपछि गणेशले शून्यतामा आफूले पूर्णता महसुस गरेको बताए ।
लेखकसमेत रहेका गणेशको दस गजामा उभिएर कृति बजारमा आइसकेको छ ।